Haddii Ay Kooxdiisu Qalalaase Dhexda Ugu Jirto, In Uu U Hambaleeyay Tottenham, In Laba Guuldaro Ay Afar Maalmood Ku Soo Gaadhay Iyo Waxyaabihii Uu Zidane Ka Hadlay Kadib Guuldaradii Wembley Stadium. – WWW.Gool24.net
Haddii Ay Kooxdiisu Qalalaase Dhexda Ugu Jirto, In Uu U Hambaleeyay Tottenham, In Laba Guuldaro Ay Afar Maalmood Ku Soo Gaadhay Iyo Waxyaabihii Uu Zidane Ka Hadlay Kadib Guuldaradii Wembley Stadium.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane oo uu culaysku ku sii kordhayo ayaa saxaafada la hadlay markii uu soo dhamaaday kulankii Wembley Stadium ee ay kooxdiisa guuldarada 3-1 ahayd ka soo gaadhay Tottenham. Zidane ayaa ka adlay haddii ay kooxdiisa Los Blancos qalalaase dhexda kaga jiro kadib laba guuldaro oo afar maalmood gudahood soo gaadhay.
Zidane ayaa kooxda Tottenham u qiray in ay shaqo fiican qabtay isla markaana ay uu ugu hambalyeeyay laakiin wuxuu sheegay in kooxdiisu ay ka soo kabsan doonto xaalada xun ee ay ku jirto. Zidane ayaa si cad u sheegay in kooxdiisu ayna nabadgalyo ku dareemayn goolka hortiisa si ay goolal u dhaliyaan.
Guuldarada Real Madrid ayaa ka danbaysay markii uu Dele Alli laba gool dhaliyay isla markaaana uu Christian Eriksen mid kale raacsaday ka hor intii aanu Cristiano Ronaldo dhalin gool soo daahay oo haddii uu xili hore iman lahaa wax ka badali karayay ciyaarta.
Zidane oo saxaafada la hadlayay ayaa meesha ka saaray in ay qalalaase ku jiraan wuxuuna yidhi: “Anagu kuma jirno qalalaase, ma dareemayno sidii in lana garaacay, laga yaabee in maskaxdayada aanaan ku haysan nabadgalyo sidii aanu markasta goolka hortiisa ugu haysan jirnay”.
Zidane oo ka hadlaya sida ay kooxdiisu fursadihii ay abuurtay uga faa’iidaysan iyo waliba in ayna fursado badan abuurin ayaa yidhi: “Marka aad hesho laba fursadood waxaa waajib kugu ah in aad laba gool ku dhaliso, maanta anagu maanu samayn fursado isla markaana goolal maanu dhalin”.
Laakiin Zidane ayaa niyadwanaag ka muujiyay in kooxdiisu ay ka soo kabsan doonto xaalada xun ee ay usbuucan ku qaadanayso wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan hubaa in aanu doonayno sidii aanu dhinaca kale ugu dhigi lahayn, maanta waanu guuldaraysanay laakiin xili ciyaareedku aad ayuu u dheer yahay. Waxaanu u hambalyaynay kooxda naga soo horjeeday isla markaana waxaanu dib u eegnay ciyaarta. Dhamaantayo waanu niyadjabsanahay”.
Zinedin Zidane oo qiimaynaya kulankii Wembley isla markaana qiraya in ayna kooxdiisu bandhig fiican samayn ayaa yidhi: “Waxaa laga yabaa in aanaan dhaamanto isku heer bandhig ku samayn, waxyaabahani way dhaacaan. Waxaanu soo guuldaraysanay laba kulan oo xidhiidh ah, sidaa daraadeed, xaalad fiican kuma jiri karno, laakiin waxaanu haysanaa saddex ama afar maalmood oo aanu nasano si aanu u sii wadano kubbada cagta”.
Zinedine Zidane oo arkayay Tottenham oo wareega 16 ka kooxood u soo baxday kadib markii ay kooxdiisa guusha ka gaadhay ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: ” Gabagabada aan la imanayaa waa in aanu guuldaro kala kulanay kooxda maanta naga fiicnayd. Guud ahaan wax walba iyaga ayaa ku sareeyay, laakiin guud ahaan anigu kama walwalsani gool la’aanta, waxaa waajib nagu ah in aanu muujino khibrada, waxaa naga dhex buuxa Champions waxaana waajib nagu ah in aanu badalno qaab ciyaareedka aanu ku jirno”.
Real Madrid ayaa Santiago Bernabeu ku soo dhawayn doonta kooxda dhibtoonaysa ee Las Palmas, waana fursada ugu horaysa ee ay Zidane iyo kooxdiisa Los Blancos iskaga reebi karaan labada guuldaro ee xidhiidhka ah ee usbuucan soo gaadhay.